Sady tsy mahavonjy poritra no vola ariana fotsiny toy ilay lalana namboarina efa simba sahady etsy Anosizato nefa niteraka fitohanana be tokoa. Tsy mankasitraka ity asa fanapenana lavadavaka tanterahin’ny fitondram-panjakana manerana ny faritra maro eto Antananarivo ity ny ankamaroan’ireo mpampiasa lalana. Raha tsiahivina, vokatry ny tsy fisian’ny asa fikojakojana ny fotodrafitrasa tamin’ny andron’ny tetezamita no niteraka izao haratsian-dalana goavana eto an-drenivohitra izao. Ankehitriny indray tsy manam-bola ny fitondrana foibe sy ny kaominina isanisany ka tsy misy ihany koa ny azo atao. Tonga saina ny rehetra ankehitriny fa tena ilaina tokoa ny lalana ary miteraka fatiantoka goavana ny faharatsiany. Manazava ny heviny tahaka izao ireto mpampiasa lalana sendra ny gazety Tia tanindrazana ireto :
Rado Rakoto, mpamily ao amin’ny taksibe zotra G mihazo an’Alakamisy Fenoarivo : Tsy mety mihitsy aloha ilay hoe : fotoam-pahavaratra vao manamboatra lalana ity e ! Sady miteraka fitohanana etsy sy eroa ilay izy no mampijaly ny madinika koa. Ny fitohanana efa tsy maintsy hiainana isan’andro aza efa fidiny.
Laza, pointeur ao amin’ny zotra G : Tena tsy mety ilay izy fa tokony hojeren’ny fitondrana ihany ilay asa fanamboarana ao anatin’ny fotoam-pahavaratra. Lasa tsy misy dikany mantsy ilay asa. Mahantra ihany koa ny mpitatitra amin’ny fitohanana etsy sy eroa nefa tokony hitatitra ny vahoaka am-pilaminana. Ho anay avy any Alakamisy Fenoarivo izao raha amin’ny 6 ora maraina izahay no miala any an-toerana tsy tonga eto Anosy raha tsy amin’ny 10 ora antoandro.